बजेट अगावै संसद भंग गर्ने दाउ - नेपालबहस
बजेट अगावै संसद भंग गर्ने दाउ
| ११:२३:३५ मा प्रकाशित
४ जेठ, काठमाडाैं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च व्ययको विवरण बजेट पेश गर्ने दिन आइसक्यो । संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर बजेट कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने अन्योलमा सरकार रहेको छ ।
भर्खरै मात्र अल्पमतको सरकारमा रुपान्तरण भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यथास्थितिमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन । किनभने वहुमत निश्चित भइसकेको छैन । संसद्बाट अस्वीकृत हुने गरी ओली बजेट ल्याउने पक्षमा छैनन् । त्यसैले उनको ध्यान पहिला विश्वासको मत आर्जन गर्नेमा केन्द्रित रहेको छ ।
हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले छिट्टै विश्वासको मत लिने बताएका थिए । संविधानतः सरकार गठन भएको ३० दिन भित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन उनी वजेट भन्दा अगावै चाहन्छन् । त्यसैले मात्र उनको वजेट पास हुने सुनिश्चित गर्छ । तर उनलाई समस्या भनेको जनता समाजवादी पार्टीबाटै छ । किनभने उसले ओलीलाई अझै समर्थन गरिसकेको छैन ।
विश्वासको मत लिने बेला जसपाको ठाकुर–महतो समूह तटस्थ मात्रै बसेको हो । स्रोतका अनुसार, ओलीले जेठ ६ गते नै विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । तर महन्थ ठाकुर समूहले समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएकाले ओली हच्केका हुन् । ओलीले जसपाको ठाकुर समूहलाई सरकारमा आउन आमन्त्रण गरेका छन् । तर मधेसका माग पूरा नभएको भन्दै जान आनाकानी गरिरहेको छ । अब भने ओली विश्वासको मत पाएपनि नपाएपनि बजेट अगावै परीषण गर्ने निश्चयमा पुगेको स्रोतको भनाई छ । विश्वासको मत नपाए तत्कालै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
ओली पक्षीय कानून व्यावसायीहरुको तर्कमा संविधानको धारा ७६(५) मा जानै पर्दैन । किनभने ओलीविरुद्ध कुनै व्यक्तिले वहुमत सिद्ध गर्ने आधार छैन । त्यसैले अब सोझै संविधानको धारा ७६ (७) आकर्षित हुने उनीहरुको तर्क रहेको छ । सोही बमोजिम उनी संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सनमा जान चाहन्छन् । ठाकुर पक्षले विश्वासको मत नदिए वाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने ओलीले निकटवर्तीहरुलाई बताउँदै आएका छन् ।
एमाले छिरेका पूर्व माओवादीमा चरम निराशा ३ घण्टा पहिले
यसै साता ओली–नेपालको संयुक्त वक्तब्य आउने सम्भावना ! २२ घण्टा पहिले
ओलीको स्वेच्छाचारितामा लगाम कस्दै अदालत १ दिन पहिले
एमाले एकताको पहल जारी २ दिन पहिले
मूल नेतृत्वमा देखिने अहंकार २ दिन पहिले
यसकारण ओली, देउवा दुवै पक्षको दाबी असंवैधानिक ३ दिन पहिले
कोपा अमेरिका २०२१ पनि डिशहोममा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने २० मिनेट पहिले
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार २७ मिनेट पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने १ घण्टा पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए १ घण्टा पहिले
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु २ घण्टा पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने २ घण्टा पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी २ घण्टा पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै २ घण्टा पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी २ घण्टा पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा २ घण्टा पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध २ घण्टा पहिले
मेलम्ची–हेलम्बु जोड्ने मोटर बाटो निर्माण जारी २ घण्टा पहिले
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा बाढीपीडितहरुका लागि राहत सामाग्री हस्तान्तरण २ घण्टा पहिले
पुल नहुँदा खोलामा जोखिम मोलेर सवारी वारपार ८ घण्टा पहिले
रिलायबल नेपालको सभाले पारित गर्यो ६० करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव ६ घण्टा पहिले
एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा १२ देशको सहभागिता २१ घण्टा पहिले
पानीजहाजको सब स्टेशन निर्माणस्थल निरीक्षण ६ घण्टा पहिले
भोलिबाट पत्रकार महासंघले अनुगमन गर्ने ३ घण्टा पहिले
एक हप्तादेखि अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुल्न सकेन ९ घण्टा पहिले
तीन लघुवित्तको शेयर लिलामी, कुनको कति ? ८ घण्टा पहिले
मेलम्ची नपा–१ का जनप्रतिनिधिद्वारा राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय ११ घण्टा पहिले
रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको सभाले आईपीओ प्रस्ताव पारित गर्दै आज २ दिन पहिले
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको यादवपक्ष अदालत जाने ५ दिन पहिले
उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, अब साँझबिहान हिँडडुलदेखि केही व्यापार गर्न पाइने ५ दिन पहिले
मदनभण्डारी प्रतिष्ठानलाई स्नातकसम्म अध्यापन गर्ने अनुमति ५ दिन पहिले
एमालेको विवाद मिल्दा माधव नेपाल दोस्रो अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्री ? ६ दिन पहिले
नगर अस्पतालको आधुनिक भवन निर्माण शुरु ४ दिन पहिले
उपत्यकामा पुनः एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी २२ घण्टा पहिले
बौद्धमा बोरामा पोको पारेर फालेको अवस्थामा खुट्टाको भाग फेला २ हप्ता पहिले
ओलीले बोलाए पार्टी स्थायी कमिटी बैठक ४ हप्ता पहिले
अधिक नेपाली श्रमिक रहेको मुलुकमा हवाई उडान गरिने ३ दिन पहिले
नेपालले दोस्रो चरणको छनोट खेलमा आज जोर्डनसँग खेल्दै २ हप्ता पहिले
रगत अभाव हुन नदिन रक्तदान कार्यक्रम ३ दिन पहिले
यादव समूह निर्वाचन आयोग पुग्याे २ दिन पहिले
राष्ट्रपतिमा दागैदाग लागेकोले परिस्थितिले सुध्रिने मौका दिएको छ: थापा ४ हप्ता पहिले
रसुवागढीको सञ्चालन मुनाफा २ करोड ७ लाख ऋणात्मक ४ हप्ता पहिले
माधव नेपालले बोलाए गुटको भेला ३ महिना पहिले
सोमबारदेखि फ्रान्समा सबै विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द १ वर्ष पहिले
देवरको ज्यान जोगाउन लागि परेकी ललिता ४ महिना पहिले
नेपाल कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको छैन १ वर्ष पहिले